अफगानीहरु नेपालका लागि पनि सुरक्षा चुनौति बन्न सक्छन : नहकुल केसी « Farakkon
२०७८ माघ १० गते सोमवार
अफगानीहरु नेपालका लागि पनि सुरक्षा चुनौति बन्न सक्छन : नहकुल केसी
प्रकाशित मिति : २०७८ भाद्र ९ गते बुधवार
तुलसीपुर, भदौ ९ । अफगानिस्तानमा तालिवानीहरुको कव्जा पछि त्यहांका हजारौं नागरीकहरु इतिबेला देश छाडेर धमाधम अन्य मुलकहरुमा प्रवेश गर्न थालेका छन् ।
दैनिक रुपमा अफगानिस्तान विमानस्थलबाट दूई हजारको हाराहारीमा त्यहांका नागरीकहरु सुरक्षाकाको खतरा महसुश गरेर अन्य मुलुकहरुमा शरणार्थीका रुपमा प्रवेश गर्दै आएका छन् ।
सीमाना जोडिएका पाकिस्तान, इरान र भारत लगायतका मुलुकहरुमा अफगानी शरणार्थीहरुको प्रवेश भइरहेको अवस्था छ । यसै साता नेपालमा पनि हवाइमार्ग हुंदै कुटनीतिक पासपोर्ट प्रयोग गर्दै तीन जना अफगानी त्रिभुवन विमानस्थल ओर्लेका छन् ।
भारत छिरेका अफगानीहरु खुला सिमानाका कारण नेपाल प्रवेश गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
यदी ठूलो संख्यामा अफगानीहरु भारत हुंदै नेपाल पस्न सफल भए भने त्यसले नेपालमा पनि सुरक्षा चुनौति बढाउन सक्ने चिन्ताहरु हुन थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा अफगानीस्तानको राजनीतिलाई नजिकैबाट नियालीरहेका दाङ तुलसीपुर ६ निवासी नहकुल केसीसंग पत्रकार खेमराज रिजालले कुराकानी गरेका छन् ।
केसी झन्डै ६ बर्ष अफगानीस्तानमा रहेर शासकीय मामिला सल्लाहाकारको रुपमा काम गरिसकेका ब्यक्ति हुन ।
– हालसालै अफगानीस्तानमा तालिवानीहरुले राज्यसत्ता कव्जामा लिएका छन् । तपाँई संग झन्डै ६ बर्ष त्यहा रहेर काम गरेको अनुभव छ । त्यहाँ राजनीतिक पृष्ठभुमिका बारे केही बताई दिनुस् न ?
उत्तरः मलाई लाग्छ, कम्तिमा दूई दशक सम्मको निरन्तर सशस्त्र आन्दोलनपछि तालिवानहरुले यतिखेर अफगानीस्तानको सत्ता कव्जा गर्न सफल भएका छन् । अतिवादी धार्मिक कट्टर विद्यार्थी संगठनबाट आफ्नो प्रभुत्व देखाउन सुरु गरेका तालीवान समुह धार्मिक विद्यार्थीको कट्टर कन्जर्भेटिभ मुस्लिमम समुहले सन २००१ मै अफगानीस्तानमा एक बर्ष सत्ता कव्जा गरि चलाएको स्मरण गराउन चाहन्छु ।
त्यसपछि सत्ताबाट वाहिरिएपनि निरन्तर आन्दोलनमा रहेको सो समुह त्यतिवेला चर्चित हुन पुग्यो । जुन वेला अर्थात सन २०११ सेप्टेम्वरमा अमेरीकाको टूविन टावरमा आक्रमण भयो । त्यसवेला दक्षिण एटलान्टिक सन्धी संगठन (नाटो) मा संवद्ध सवै मुलुकहरुले तालीवानहरुको विरोध मात्रै गरेनन्, उनीहरुलाई परास्त गर्न ठूलो मात्रामा सैन्य सहयोग पनि गरे । अनि तालिवान समुह विशेष रुपमै चर्चामा आउन सुरु भयो ।
पटक/पटक उनीहरुले आतंकबादी नेता ओसामा विन लादेनलाई पनि शरण एवं संरक्षण दिए राखे । अन्ततः अमेरीकी आक्रमणमा लादेन पाकिस्तानमा मारिए । उनी मारिएपनि तालीवानीहरुको आन्दोलन रोकिएन । निरन्तरको आन्दोलनपछि हालै उनीहरुले क्रमश गाँउ, जिल्ला हुंदै केन्द्रीय राज्यसत्ता पनि कव्जा गर्न सफल भए ।उनीहरुको राजनीतिक उदेश्य भनेको सरीया कानुन अनिवार्य रुपमा कार्यन्वयनमा ल्याउनु थियो । उनीहरु आफ्नो कट्टर धर्मको आवरण भन्दा वाहिरका नागरीकलाई स्वीर्कादैनन् । मानव अधिकारका सवालमा अत्यन्तै कठोर पनि देखिन्छन् ।
आइतवार मात्रैको समाचारमा अफगानीस्तानकी एक जना महिला सांसदले देश छाड्न वाध्य भइन । कारण उनी हिन्दु शिख धर्म मान्ने नागरिक थिइन । अझै स्पष्ट भन्नुपर्दा उनीहरु स्वतन्त्र प्रेसका सवालमा पनि उदार छैनन् । त्यसै कारण गत आइतवारै अफगानीस्तानमा चर्चित बिबीसी संवाददाता विलाल सर्वारीले पनि सुरक्षाको कारण देखाउंदै देश छाडिसकेका छन् । यी त ताजा घटना मात्रै हुन् । हेर्दै जाऔं, अझै हजारौं अफगानीहरुले देश छाड्न बाध्य हुने छन् ।
– कति अफगानीले आफ्नो मुलुक छाड्लान ?
उत्तरः अहिल्यै संख्यामा बताउन सहज नहोला । तर, मलाई लाग्छ, अफगानीस्तानबाट हजारौं नागरीकले देश छाड्न बाध्य हुने छन् ।
धार्मिक आस्थाका आधारमा हिन्दु, बुद्धिष्ट, क्रिश्चियन तथा उदार मुश्लीमहरु जुन धार्मिक रुपले कट्टर छैनन् र मानव अधिकारका सवालमा सुशुचित र उदार छन् उनीहरुले पनि मुलुक छाड्ने क्रम देखिएको छ । एकीन तथ्यांक सूचनाको अभावका कारण अझै पाउन सकिएको छैन । तालिवानीहरुले कव्जा जमाउनु अघि अनलाइन संपर्कमा आउने त्यहांका साथीहरु पनि अहिले अनलाइन सम्पर्कबाट वाहिर छन् । यो कारण पनि स्वतन्त्र प्रेसका सवालमा तालिवानीहरु उदार छैनन् भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ ।
केही समय अघि सूचना प्रविधिको पहँुचमा उदार बने जस्तो देखिएपनि लोकतन्त्र र मानव अधिकारको संरक्षणका सन्दर्भमा तालीवानीहरु अझैपनि सुध्रिएको जस्तो पाइदैन । त्यस अर्थमा पनि धेरै नागरिक धमाधम देश छाडिरहेको अवस्था छ । यो क्रम कहिले सम्म जारी रहने भन्ने विषय तालिवानीहरुको साशन सत्ताको उदारतामा निर्भर रहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।
– धेरै अफगानीहरु सीमा नाका हुँदै भारतमापनि शरण लिन प्रवेश गरेको अवस्था छ । त्यहांबाट नेपाल छिर्ने सम्भावना र त्यसले नेपाललाई कस्तो सुरक्षा चुनौति थप्न सक्ला ?
उत्तरः नेपाललाई यसले भविस्यमा प्रभाव नपार्ला भन्न सकिन्न । अफगानीस्तानबाट आएका शरणार्थीहरुलाई भारत, पाकिस्तान, इरान लगायतका मुलुकहरुले आश्रय दिइरहेका छन् । शरणार्थीका रुपमा भारत छिरेका अफगानीहरु खुला सीमाका कारण नेपालपनि सहजै प्रवेश गर्न सक्छन् । मानविय नाताले केहीलाई शरण दिनु स्वाभाविकपनि हो । तर, यदि धेरै अफगानीहरु नेपाल प्रवेश गरे भने नेपालले थेग्न सक्ने छैन । त्यसले सुरक्षा चुनौतिहरु देखिन सक्ने छन् । किन, भने नेपालको त्रिभुवन विमानस्थलबाटै सन २००५ मा उडेको इन्डियन एयरलायन्सको जहाज तालिवानीहरुले नै अपहरण गरेर अफगानीस्तानको कान्दाहर विमानस्थलमा पुराएको घटना अझै ताजै छ ।
यो सम्वेदनशिल विषय भएकाले सरकारले यसमा विशेष भुमिका निर्वाह गर्न आवस्यक छ । केही दिन अघि मात्रै ३ जना अफगानीहरु कुटनीतिक पासपोर्ट प्रयोग गरी हवाई मार्ग हुंदै त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लेका छन् । उनीहरुका विषयमा सरकारले अनुसन्धान गरि रहेको छ । तर, खुला सीमाका कारण भारतबाट पैदल मार्गबाट पनि अफगानीहरु नेपाल पस्ने संभावनालाई सरकारले वेलैमा सोच्न आवस्यक छ । यसका लागि सीमा नाकामा विशेष सुरक्षा सतर्कता अपनाएर अनिवार्य रुपमा अभिलेखिकरण र निगरानी पनि बढाउन सकिन्छ ।
आवस्यक परेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाली सेनालाई नाकामा परिचालन गरेर यो चुनौतिबाट बच्न सकिन्छ ।
यो किन भनिरहेको छु भने भुटानबाट भारत हुंदै नेपाल छिरेका करिव एक लाख भुटानी शरणार्थी व्यवस्थापनमा नेपाललाई कति सकश भएको थियो भन्ने त हामीले भोगिसकेका छौं नि । यो अवस्थामा सरकार वेलैमा सचेत र क्रियाशिल हुनुपर्छ भन्ने मेरो सुझावपनि हो । अझ भन्नुपर्दा यो भारत र पाकिस्तानको पनि निकै चांसोको विषय हो ।
– अफगानस्तानको शासन सत्ताको सुरक्षार्थ अमेरिकाले त्यति धेरै पैसा र हतियार सहयोग गरेपनि अफगानीहरु आफ्नो सत्ता जोगाउन किन सफल भएनन् ?
उत्तरः सवैभन्दा पहिलो कुरा त अफगानिस्तानमा अमेरिकाले पैसा र हतियार प्रसस्त सहयोग गरेपनि त्यहांको नेतृत्वको कुशलतामा विकाश हुन सकेन । स्वार्थी नेतृत्वका कारण प्रहरी र सेनाको आत्मवलपनि मज्बुत हुन सकेन । प्रान्त कव्जामै रहेका तालीवानीहरु क्रमश अफगानिस्तानको राजधानी कव्जा गर्दै छन् भन्ने सुइँको पाएर जव त्यहांका राष्ट्रपति नै भागिदिन्छन् भने सेना र प्रहरीले कसका लागि लड्ने? यो अवस्थामा सेना प्रहरीले जतिसुकै अत्याधुनिक हातहतियार भएपनि तालीवानी लडाकुलाइ परास्त गर्नुको औचित्य देखेनन् ।
सेना प्रहरीको उच्च मनोवल कायम राख्न सरकारले पनि सकेन अनि आत्मसमर्पणकै अवस्था सायद आयो होला । अमेरिका लगायतका मुलुकहरुले आर्थिक तथा शैन्य सहयोग त गरे, तर अफगानीहरुलाई राष्ट्रियताका सवालमा वलियो बन्ने गरी सुशिक्षित गर्न भने सकेनन । यसमा भौगालिक र सांस्कृतिक पक्षमा पर्याप्त ध्यान दिनु पर्ने थियो । त्यो कुरामा चुकेको देखिन्छ । सुशाशन कायम र भ्रष्टचार निन्त्रण हुन सकेन । यही कारण नै अमेरिकी सेना फर्केको केही सातामै अफगानीस्तानको राजधानीमै तालिवानहरुले कव्जा जमाए ।
यसका पछाडि जियो पोलिटिक्सले पनि त्यत्तिकै भूमिका खेलेको देखिन्छ । चिन र तालीवानी नेताबीच अघोषित रुपमा कुनै स्थानमा समझ्दारी भएको केही दिनमै तालीवानहरुले सदरमुकाम कव्जा जमाउन सफल भए ।
तर, अहिले अमेरिका तथा वेलायतको चिन्ता के छ भने अफगानिस्तान निरन्तर रुपमा अपराधको क्रिडास्थल नबनोस् । यसमा चिन रुसले विशेष चांसो एवं भूमिका निर्वाह गनुर््पर्दछ । यद्धपी यसमा चिन र रुसको फरक/ फरक स्वार्थ छ ।
मलाई लाग्छ, यसको कारण दूई तर्फी नागरिकता पनि हो । अफगानिस्तान्का अधिकांश धनाढ्य र बुद्धिजीविहरुको अन्य मुलुकहरुको पनि डोयल सिटीजन्सिप छ । त्यसकारण पनि अन्तिम समयसम्म अफगानीस्तानलाई माया गरिरहन चाहंदैनन् ।
जव आफ्नो मुलुकप्रति अगाध माया नै हुंदैन र अन्य मुलुकमा गएर फेरि त्यहांपनि नागरिककै रुपमा बाँकी जीवन बिताउने सोच हुन्छ भने त्यहां राष्ट्रियता पनि कमजोर हुँदो रहेछ । यसले त सवैभन्दा बढी समस्या अल्पसंख्यक र जनजातिहरुलाई पारेको छ । महिला र वालवालिकालाई पारेको छ ।
किनकि, तालीवानहरु म्हिला अगाडि बढाउन पटक्कै उदार छैनन् । मानव अधिकारका सवालमापनि गम्भीर छैनन । त्यसैले डोयल सिटिजन शिप दिनुनै घातक हो, भन्ने कुरा त्यहांका राष्ट्रपतिको वहिर्गमनले नै स्पष्ट पारेको छ । डोयल सिटीजनसिप पाएका नागरिकले आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि जति वेला असहज अवस्था आयो त्यति वेलै देश छाडिदिन सक्छन् । जुन राष्ट्रियताका सवालमा अत्यन्तै घातक पक्ष पनि हो ।
‘पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बन्दै–राप्ती शान्ति उद्यान’
भविष्य नै बालबालिका हुन भन्ने बुझ्न सके बालश्रम अन्त्य गर्न सकिन्छ – नवराज लामिछाने
कुमाल समाज दाङको अध्यक्षमा रामलाल कुमाल चयन
नेपाल घरबहाल सरोकार संघ दाङको अध्यक्षमा बस्नेत,सचिबमा गौतम
शिक्षक बुढाथोकीले बुवाको संझनामा बिद्यालयमा निर्माण गरे सरस्वतिको मन्दिर
बिकाश पुनलाई प्रहरीले काठमाडौंबाट दाङ ल्यायो
सञ्चारिका समुह दाङको अध्यक्षमा गौतम
मैले अघि सारेको बृहत सिंचाई आयोजनामा तालहरु बनाएर आज कम्युनिष्टले राजनीति जोगाई रहेका छन् – दीपक गिरी
जन्मदिनमा बालबालिकाको लागि केसीले दश हजार बराबरको खाद्यान्न तथा स्टेसनरी सामाग्री दिए
तुलसीपुर ११ मा कांग्रेसको शोक सभा
काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य गेहेन्द्र गिरीलाई ११ किलोको माला
पृथ्बी जयन्तिमा तुलसीपुरमा ¥यालीसहित कोणसभा गर्ने तयारी
घोराहीमा विविध विधामा पत्रकारहरुको क्षमता अभिबृद्धी तालिम सुरु
१ सय अङ्कले घटेकाे शेयर बजार राताम्मे
थप १० हजार ३ सय १९ जनामा कोरोना पुष्टि
लागुऔषध र लेनदेन मुद्दाका दुई फरार प्रतिबादी पक्राउ
३२ दिनपछि पक्राउ परे घोराही कारागारका फरार नाइके यमराज, अब झनै सजाए थपिने
सवारी दुर्घटनाका घाइते माओबादी नेता चौधरीको मृत्यु
मानवसेवामा रमाईरहेकी मुना लामा
बबि बस्नेत (बेईमान)
गढवा गाउँपालिका अध्यक्षलाई पत्रकार दुखहरण यादवको खुल्ला पत्र
तुलसीपुरमा ‘ओमिक्रोन’ फेस्टिवल – २०७८
राप्ती साहित्य परिषद्ले स्थापना दिबसमा चार दर्जन स्रष्टालाई पुरस्कृत गर्दै